म्याकका लागि उत्तम नि: शुल्क VPN (२०२०) - सेटअप गर्न र प्रयोग गर्न सजिलो - Vpn
अझै, म्याकको लागि कुनचाहिँ उत्तम नि: शुल्क VPNs हो भनेर पत्ता लगाउँदै?ठिक छ, हामी यहाँ मद्दत गर्न आएका छौं।
VPN हरू यस उपकरणलाई अनलाइन संसारमा सुरक्षित राख्नका लागि उत्तम उपकरणहरू हुन्। तपाईंले सोचिरहनुपर्दछ कि मलाई सुरक्षित राख्न मलाई VPN किन आवश्यक छ यदि मसँग पहिले नै मेरो म्याकमा एन्टिभाइरस स्थापना गरिएको छ भने। कुरा यो हो, VPNs ले सुरक्षाको अतिरिक्त तह थप गर्दछ जब तपाईं अनलाईन ब्राउज गर्दै हुनुहुन्छ। र VPN हरू मात्र गर्दैन, तर उनीहरूले तपाईंलाई विश्वको कुनै पनि भागबाट ब्लक गरिएको र सेन्सर गरिएको सामग्री पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ र तपाईंलाई अनावश्यक विज्ञापनहरू र पप-अपहरू रोक्न मद्दत गर्दछ।
आज, हामी तपाइँलाई तपाइँको म्याकको लागि नि: शुल्क VPNs को हाम्रो शीर्ष छनौट दिनेछौं। हामी यसमा प्रवेश गरौं।
हामी निःशुल्क VPNs किन प्रयोग गर्छौं?
नि: शुल्क VPNs को साथ कुरा यो हो कि तपाईं सेवामा नि: शुल्क पहुँच पाउनुभयो भने, यो सीमित हो र प्रीमियम योजनाहरूको चिन्हमा छैन। तर हामी विश्वास गर्दछौं कि केही पनि नहुनु भन्दा केही राम्रो हुन्छ। त्यसोभए, हामीले यो सुनिश्चित गरेका छौं कि तपाईले आफ्नो म्याकको लागि उत्तम नि: शुल्क VPNs पाउनुहुनेछ।
सुरक्षित वीपीएन सेवाहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ? जाँच गर्नुहोस् शीर्ष १० सर्वश्रेष्ठ VPN सेवाहरू हाम्रो ब्लग सेक्सन बाट।
म्याकका लागि उत्तम नि: शुल्क VPNs को सूची:
१. VPN एक्सप्रेस - होइन # १ VPN जुन तपाईं प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ
यो # 1 VPN तपाईले आफ्नो म्याकको लागि निःशुल्क लिन सक्नुहुन्छ। यद्यपि उनीहरूको सेवामा पहुँच गर्नु अघि तपाईंले भुक्तानी गर्नु आवश्यक छ त्यहाँ एक क्याच छ, जस्तै तिनीहरूले प्रस्ताव राख्छन् Days० दिन फिर्ती नीति , तपाईं days० दिन को मार्क भित्र आफ्नो सदस्यता अप्ट-आउट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको पूरा पैसा फिर्ता पाउनुहुनेछ। यो बिग सुर (११), क्याटालिना (१०.१5), मोजाभ (१०.१4) र उच्च सियरा (१०.१3), एक्स योसेमाइट (१०.१०) र एक्स एल क्यापिटान (१०.११) को लागि उपलब्ध छ।
ओएससँगै, यसले त्यहाँ सबै म्याकबुक र आईम्याक मोडेलहरूमा काम गर्दछ। तपाईं यसलाई केवल तीन सजिलो चरणहरूमा सेट अप गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको सफारी ब्राउजरमा अतिरिक्त सुरक्षाको साथ इन्टरनेटको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
तपाईंले पहिले नै सेवाको लागि भुक्तान गर्दा, तपाईं सबै सुविधाहरू कुनै सीमा बिना अनलक पाउनुहुनेछ।
तपाईले सर्भर पाउनुभयो १ covering० स्थानहरुबाट संसार भरि 94 countries देशहरु लाई।
उच्च गतिको लागि अनुकूलित सर्भरहरू।
स्प्लिट टनेलिंग सुविधा जसले तपाईंलाई कुन सामग्रीको प्रोक्सीड हुनेछ र कुन नियमित जडानमा जडान हुने छनौट गर्न अनुमति दिन्छ।
नेटवर्क किल स्विच सुविधा जसले प्रोक्सी नेटवर्क बन्द छ भने तपाईंको यातायात अवरुद्ध छ भनेर निश्चित गर्दछ।
एक पटकमा devices उपकरणहरू जडान गर्नुहोस्।
यदि तपाईं नि: शुल्क परीक्षण पछाडि तिनीहरूको प्रीमियम सेवाहरू खरीद गर्न चाहनुहुन्छ भने। यहाँ उनीहरूले प्रदान गर्ने योजनाहरू छन्
एकल महिनाको योजना: यो $ १२.95 ((₹555..44) को लागि बिल गर्दछ।
छ महिनाको योजना:यो बिल $ .99 ((7 7₹7.१०) प्रति महिना र six।। .95 ((23 232323.4..4)) कुल छ महिनाको लागि।
पन्ध्र महिना योजना: यसले month .6.77 (₹22 २.२3) प्रति महिना र fifteen .$.95 ((75 7575.3..36) लाई पन्ध्र महिना अवधिमा बिल गर्दछ।
यी सबै योजनाहरूको -० दिने मनी फिर्ता ग्यारेन्टी छ।
२. NordVPN - म्याकको लागि समग्रमा उत्तम
यो पनामा आधारित प्रोक्सी नेटवर्क प्रदायक एक उत्तम हो जुन तपाईं आफ्नो म्याकको लागि नि: शुल्क पाउन सक्नुहुन्छ। तिनीहरूसँग यो योजना पनि छ Days० दिनको फिर्ती ताकि तपाईं तिनीहरूको सबै प्रीमियम सुविधाहरूमा पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ days० दिनको लागि कुनै सीमितता बिना र एक महिना चिन्ह अघि तिनीहरूको सदस्यता अप्ट-आउट गर्नुहोस्।
NordVPN MacOS को लागी समग्र सबै भन्दा राम्रो VPN हो, यसको ईन्टरफेस ExpressVPN भन्दा बढी सफा र सजिलो छ। उनीहरूले ओब्स्क्स्टेटेड सर्भरहरू पनि प्रस्ताव गर्छन्, यी सर्भरहरू वैकल्पिक सर्भरहरू बाहेक केहि होइनन् जुन विशेष प्रयोग गर्न सकिन्छ VPN पहुँच गर्नका लागि जहाँ यस्तो सेवा प्रयोगको लागि प्रतिबन्धहरू भारी हुन्छ। तपाई TCP / UDP जस्ता प्रोटोकोलको बीचमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ जुन गति र विश्वसनीयताको लागि तपाईको प्राथमिकतामा निर्भर गर्दछ।
पहिले नै भुक्तान गरेर, प्रयोगकर्ताले प्रीमियम प्रयोगकर्ताले प्राप्त गर्न सक्ने सबै सुविधाहरू अनलक गर्न सक्दछन्। तिनीहरू मध्ये केही हेरौं।
तपाईं 00 54०० भन्दा धेरै सर्भरहरू मध्येबाट छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जुन 59 countries देशहरूमा अवस्थित छन्।
Inhouse NordLynx एन्क्रिप्शन विधि जसले तपाइँको डेटा धेरै सुरक्षित राख्छ।
धेरै सयौं P2P सर्भरहरू जसले तपाईंलाई सजीलो र सुरक्षित रूपमा ठूला आकारका फाइलहरू साझेदारी गर्न अनुमति दिन्छ।
कुनै ब्यान्डविथ सीमा छैन, तपाइँ कुनै थ्रॉटलिंग बिना तपाइँको उच्च-स्पीड इन्टरनेटको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
एक पटकमा devices उपकरणहरू जोड्नुहोस्।
तपाईं MacOS NordVPN सुविधाहरूको पूर्ण सूची जाँच गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ
यदि तपाइँ तिनीहरूको प्रीमियम सेवा खरीद गर्न चाहानुहुन्छ भने NordVPN ले तीन योजनाहरू प्रदान गर्दछ।
एक महिनाको योजना:यो $ ११.95 ((3₹3)) को लागि बिल गर्दछ
वार्षिक योजना:यो प्रति महिना $ 9. .२ (₹ 4₹4) को लागी बिल गर्दछ।
दुई वर्ष योजना:यो प्रति महीना 71 3.71 (27 @ 274) को लागी बिल गर्दछ।
सबै योजनाहरू जुन NordVPN ले 30० दिने मनी फिर्ता ग्यारेन्टीको साथ आउँदछ।
Hot. हटस्पट शिल्ड VPN - गति विश्वसनीयता संग विश्वसनीय
हटस्पट शिल्डको नि: शुल्क परीक्षण संस्करण, NordVPN र ExpressVPN भन्दा फरक, नि: शुल्क प्रयास गर्न सकिन्छ; तपाईंले पहिले नै भुक्तानी गर्नु पर्दैन। तर यसको दोष यो हो कि तपाईं सीमित सुविधाहरू पाउनुहुन्छ। यसमा पनि एउटा क्याच छ, उनीहरूले days 45 दिनको मनी फिर्ता ग्यारेन्टी योजना पनि प्रस्ताव गर्दछन्, यदि तपाईं कुनै पनि सीमितता बिना सबै प्रीमियम सुविधाहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं तिनीहरूको प्रीमियम योजनाहरू खरीद गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि before before दिन अघि बाहिर अप्ट आउट गर्नुहोस्। चिन्ह
हटस्पट शिल्डले विश्वको सब भन्दा छिटो VPN सेवा भएको दावी गर्दछ। हामीले यो दावीलाई जाँच्न सकेनौं र यो हामीले फेला पारेका छौं: हटस्पट शिल्डको क्याटलप्ट हाइड्रा टेक्नोलोजीको साथ, यसले उनीहरूको डाउनलोड गतिमा २.2.२% ले वृद्धि गर्न सफल भयो, जबकि अन्य VPN हरू कम्तिमा .5२..5% ले गिरे। त्यो वास्तवमै छिटो छ!
हामी तल पूर्ण रूपमा नि: शुल्क संस्करणको विशेषताहरू सूचीबद्ध गर्दैछौं।
प्रत्येक दिन 500 Mbs को लागी उच्च गति इन्टरनेट।
भरपर्दो गतिको साथ अमेरिका आधारित सर्वर प्रयोग गर्न सक्दछ
सैन्य-ग्रेड ईन्क्रिप्शनले प्रत्येक दिन million करोड भन्दा बढी मालवेयर र फिसि sites साइटहरू रोक्दछ।
हाइड्रा नामको प्याटेन्टेड प्रोप्राइटरी प्रोटोकल, जुन अग्रणी विज्ञहरु द्वारा छिटो र सबैभन्दा सुरक्षितको रूपमा प्रमाणित गरिएको छ।
यदि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंलाई हटस्पट शिल्डको प्रीमियम संस्करणको लागि जान आवश्यक छ भने, यहाँ योजनाहरू छन् जुन तपाईं रोज्न सक्नुहुन्छ।
प्रीमियम योजना:यदि तपाईं यस योजनाको वार्षिक प्याक खरीद गर्नुहुन्छ भने, तपाईं यसलाई .8 71.88 मा पाउनुहुनेछ। यदि तपाईं यसलाई एकल महिनाको लागि मात्र खरीद गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं यसलाई $ १२.99। मा पाउनुहुनेछ।
प्रीमियम परिवार योजना:यदि तपाइँ यस योजनाको वार्षिक प्याक खरीद गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ यसलाई १$3..88 को लागि पाउनुहुन्छ। यदि तपाईं यसलाई एकल महिनाको लागि मात्र खरीद गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंको $ १। .99। मूल्य लाग्नेछ।
यी दुवै योजनाहरू-45 दिने मनी फिर्ता ग्यारेन्टीको साथ आउँदछन्।
H. Hide.Me - १०GB प्रत्येक महिना
Hide.me VPN ले तपाईलाई हरेक महिना १० गिगाबाइट्सको सेवा दिन्छ तपाईको नि: शुल्क योजनाको साथ जहाँ तपाईले अमेरिका, क्यानडा, नेदरल्याण्ड, र सिंगापुर जस्ता स्थानहरूबाट सर्वर रोज्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि लग नि: शुल्क संस्करणको साथ राखिएको छैन, र अनुप्रयोगसँग विज्ञापनहरू छैनन् जस्तो केहि निःशुल्क परीक्षण संस्करणहरूको मामलामा।
१० जीबी डाटा सीमा वास्तवमै ठूलो चाल हो, जुन कुनै पनि नि: शुल्क परीक्षण संस्करणले प्रदान गर्दछ। यो त्यस्तो चीज हो जसले हामीलाई यस सूचीमा Hide.me समावेश गर्दछ। यो त्यहाँ रोक्दैन, नि: शुल्क संस्करणको साथ, तपाईले मिलिट्री ग्रेड शीर्ष निशान एन्क्रिप्शनहरू साथ साथै आईपी लीक सुविधा पाउनुहुनेछ जुन फेरि निःशुल्क संस्करणको साथ ठूलो व्यवस्था हो।
Hide.me ले तपाइँको नि: शुल्क प्रयोगको बखत तपाइँलाई केहि महान सुविधाहरू प्रस्ताव गर्नुपर्दछ, आउनुहोस् हामी केहि कुञ्जीहरूलाई हेरौं
तपाइँले प्रत्येक महिना १० जीबी प्रयोग सीमा पाउनुहुन्छ। केहि उच्च परिभाषा सामग्री स्ट्रिम गर्न र टोरेन्टहरू डाउनलोड गर्न पर्याप्त छ।
तपाईं सर्भर छनौट गर्न सक्नुहुनेछ दुनिया भरका different बिभिन्न स्थानहरूबाट। (संयुक्त राज्य अमेरिका, नेदरल्याण्ड्स, क्यानडा, सिंगापुर)
तपाईंको यातायात मा सैन्य ग्रेड ईन्क्रिप्शन। I AES-256 ईन्क्रिप्शन। धेरै सुरक्षित
यसले आईपी लीक सुरक्षा प्रदान गर्दछ।
स्प्लिट टनेलिंग सुविधा, जुन मल्टिटास्कि while गर्ने क्रममा धेरै आवश्यक छ।
जब यो प्रीमियम खरीदहरूको कुरा आउँछ, Hide.me ले तीन योजनाहरू प्रस्ताव गर्दछ।
एक महिनाको योजना:$ १२.95 at मा बिल गरियो
छ महिनाको योजना: प्रति महिना 99 4.99 मा बिल गरियो (%२% बचत)
एक बर्षे योजना:प्रत्येक महिना $ 32 32२ मा बिल गरियो (% 74% बचत)
यी सबै योजनाहरू days० दिनको फिर्ती नीतिसँग आउँदछन्।
Tun. टनेलबियर VPN - शुरुआतका लागि महान
यदि तपाईं VPN दृश्यमा नयाँ हुनुहुन्छ भने, यो तपाईंको लागि VPN हो। यो सुपर उपयोगकर्ता मैत्री छ र प्राथमिक काम गर्दछ। प्रत्येक महिना mb००mbs डाटाको साथ, ठूला कार्यहरूको लागि प्रयोग गर्न यो उत्तम छैन, तर यसले साना कामहरू प्रभावकारी र सजिलोसँग गर्दछ। तपाईं यसको सुविधाहरू प्रयोग गर्न गीक हुनु आवश्यक छैन।
टनेलबियर उनीहरूको सुरक्षा को बारे मा यति पारदर्शी छ कि तिनीहरूले शाब्दिक रूपमा आफ्नो सुरक्षा लेखा परीक्षा प्रकाशित गर्छन् जुन स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन्छन्। तपाईं उही जाँच गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ।तपाईंले मैन्युअल तरिकाले टनेलबियर कन्फिगर गर्नु आवश्यक छ किनकि यसले म्यानुअल रूपमा लिनक्समा आफै कन्फिगर गर्दछ।
केही मुख्य सुविधाहरू जुन तपाईं टनेलबियरको नि: शुल्क संस्करणको साथ पाउनुहुनेछ।
प्रत्येक महिना usage०० एमबी डाटा उपयोग।
लगभग २ countries देशहरुबाट सर्भर छनौट गर्न स्वतन्त्रता। (बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, जर्मनी, जापान आदि)
AES-256 बिट ईन्क्रिप्शन सुपर सुरक्षित छ।
अनुकूलित ग्लोबल सर्भर (तर केवल M००MBs सम्म)
VPN सेवा तल जान्छ भने तपाईंको डाटा रक्षा गर्न स्विच सुविधा नष्ट गर्नुहोस्।
टनेलबियरले प्रीमियम अपग्रेडेशनको लागि २ योजनाहरू प्रदान गर्दछ।
असीमित योजना:जुन प्रति महिना $ 33.33। मा बिल गर्दछ।
टोली योजना:जुन प्रति महिना 75 75.75। मा बिल गर्दछ।
सुरुnelले कुनै पनि पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी प्रदान गर्दैन।
प्रायः सोधिने प्रश्नहरू:
१ क्यू मैले मेरो म्याकमा VPN प्रयोग गर्नु पर्छ?
बर्ष:तपाईंले निश्चित रूपमा VPN प्रयोग गर्नु पर्छ। किन? किनकि यसले तपाईंको सुरक्षामा अतिरिक्त लेयर थपेको छ र तपाईंलाई अनलाइन वातावरणमा सुरक्षित रहन मद्दत गर्दछ। तपाईंले सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि VPN तपाईंले प्रयोग गरिरहनु भएको प्रतिष्ठित हो र आधिकारिक वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्नुहोस्। यदि तपाईं सस्तो वा Modped VPN को लागी जानुहुन्छ भने, यसले तपाईंको गोपनीयतालाई राम्रो भन्दा बढि नोक्सान गर्न सक्दछ।
२Q के एप्पलले VPN सिफारिस गर्छ?
बर्ष:यद्यपि एप्पलको VPNs को लागी यसको वेबसाइटमा समर्पित पृष्ठ छ, यसले मार्केट गर्दैन र आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई VPN प्रयोग गर्न रोक्दैन। तपाईं यसको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ ।
3Q। के म ट्र्याक गर्न सक्दछु यदि म VPN प्रयोग गर्दछु?
बर्ष:होइन, तपाई ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्न जब तपाई VPN मा जडित हुनुहुन्छ, तपाईको आईपी ठेगाना सेवा द्वारा मास्क गरिएको छ, र यदि कसैले तपाईलाई ट्र्याक गर्न खोजिरहेको छ भने, उनीहरुले VPN को IP ठेगाना देख्नेछन् तपाईको होइन।
4Q। अनलाइन बैंकि doing गर्दा VPN प्रयोग गर्न सुरक्षित छ?
बर्ष:हो, बैंकिंग अनलाइन गर्दा VPN सेवा प्रयोग गर्न सुरक्षित छ, यसले तपाईंलाई सुरक्षाको थप तह दिन्छ र साइबर चोरीबाट तपाईंलाई सुरक्षित राख्छ। राम्रो VPN ले तपाईका लग लगहरू राख्दैन, त्यसैले तपाईले आफ्नो बहुमूल्य जानकारी चोरी र बेच्दै हुनुहुन्छ भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन।
VPN हरू तपाईको सुरक्षा र गोपनीयताका लागि उत्तम उपकरण हुन्। धेरै नि: शुल्क VPN हरू कागजमा मात्र राम्रो हुन्छन् र वास्तवमा काम गर्दैनन् जुन उनीहरूले दावी गर्छन् जस्तो कि व्यावहारिक प्रयोगको कुरा आउँछ, तर यी वीपीएनहरू जुन हामीले हाम्रो छनौटहरूमा उल्लेख गरेका छौं पूर्ण रूपमा विश्वासनीय र वास्तविक छन्। यद्यपि तपाईं तिनीहरू मध्ये केही नि: शुल्क संस्करणका साथ सबै सुविधाहरू प्राप्त गर्नुहुने छैन, तर जेसुकै सीमित सेवाहरू उनीहरूले प्रदान गर्दछन्, यो वैध हुनेछ।
तपाइँको लागि कसले काम गर्दछ रोज्नुहोस् र सुरक्षित र अनलाइन हुनुहोस्।
एक्सप्रेसभीपीएन को उपयोग गरेर नेटफ्लिक्स हेर्नुहोस्
संयुक्त राज्य अमेरिका मा हॉटस्टार कसरी हेर्ने?
कसरी कम्प्युटरमा तपाईंको आफ्नै बीट बनाउने
टम्बलरमा कसरी सुरक्षित खोजी असक्षम गर्ने
फिल्महरू अनलाइन नि: शुल्क पंजीकरण हेर्नुहोस्
नि: शुल्क रेटेड फिल्महरू अनलाइन
खेल वेबसाइटहरू अवरुद्ध छैनन्
कसरी स्पिटेफमा विद्यार्थी छूट प्राप्त गर्ने यदि मसँग पहिले नै प्रीमियम छ